ZoomInfo: Dobe B2B Data emelitere | Martech Zone
Nnọọ ntakịrị nke data B2B gị agaala. Zoominfo na-akọ na 70% nke data B2B niile ga-enwe mgbanwe otu ma ọ bụ karịa n'ime afọ. Ndị ọrụ gbanwere, nkwalite, nnweta, mmechi azụmahịa… ya niile nwere ike ịchụpụ ogo data ị na-atụ anya. Okwu data ndị a nwere ike ịkpata nsogbu na ahịa na azụmaahịa. Na ahịa, ọ bụrụ na ndị otu na - apụ apụ na - akpọ ozi ma ọ bụ zigara ndị mmadụ ozi na - anọghịzi, oge agwụla. Na ahia, inwe nsogbu data nwere ike ime ka email gị nweta ya, na-eme ka o sikwuoro gị ike ịntanetị ị ga-eme ya na igbe mbata kama ijide na nzacha spam.
Ego ole ka data olile anya gị bụ ihe mgbe ochie ma ọ bụ ezughi oke? Ka Zoominfo nyochaa nchekwa data gị, kpughee atụmanya gị kachasị mma, melite ihe niile ma gbanwee usoro ịchọrọ gị ka ọ bụrụ igwe na-enweta ego.
Denye Ọrụ Data Zoominfo
Ihe omuma data - nyocha miri emi nke ngwa ahia gi ma obu CRM nchekwa data ka i wee nweta ihe omuma ndi choro iji bulie ahia gi. Zoominfo na-enye nzukọ gị ndụmọdụ dị irè iji melite ọganiihu nke mkpọsa gị.
Njikwa data - CRM data na-agbanwe. Zoominfo nwere ike wepu ozi mgbe ochie, nyochaa adreesị email maka nnyefe, chọta atụmanya ọhụrụ, melite na ndekọ zuru ezu, gbakwunye ndị na-eme mkpebi, mepụta nkewapụta ma nye mmelite na-aga n'ihu.
Maka ndị ọkachamara na obere azụmaahịa, Zoominfo na-enye Zoominfo Jikọọ. Soro ZoomInfo Jikọọ iji nweta ebe nchekwa data B2B na-etolite ugbu a, yana ozi zuru oke nke ihe karịrị ndị ahịa 65 nde na azụmahịa 6.
Zoominfo na-enyekwa Zoominfo Pro nke gunyere profaịlụ ekwuputara na mgbe niile - gbasara ndị ọkachamara nde 65 na azụmahịa 6 nde. Zoominfo Pro na-enye gị ohere ịhazi nkenke dị ịtụnanya ma rute ọtụtụ ohere ịzụta atụmanya.
Mpempe Mpaghara Zoominfo
Maka obere azụmaahịa na-enweghị mmefu ego, Zoominfo nwekwara Community Edition ebe ị nwere ike isonye karịa ndị ọrụ ZoomInfo 100,000 na-ekekọrịta kọntaktị azụmaahịa ha na-akpaghị aka iji nweta ohere ZoomInfo.
Zoominfo na-enye API!
Tags: b2bb2b datazoominfombipụta obodo zoominfozoominfo jikọọọrụ data zoominfozoominfo pro
Ihe ị na-anụghị na Apple Keynote: iBeacons